एमसीसी टोलीलाई माधव नेपालको जवाफ – राष्ट्र हित वि’रुद्धको अनुदान हामीलाई चाहिँदैन ! - Thulo khabar
एमसीसी टोलीलाई माधव नेपालको जवाफ – राष्ट्र हित वि’रुद्धको अनुदान हामीलाई चाहिँदैन !
काठमाडौ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा नेता नेपालले आफूहरू राष्ट्रहितभन्दा फरक तरिकाले जान नसक्ने बताएका छन् । उनले गठबन्धन सरकारमा सहभागी पाँच दलबीच नै छलफल गरेर एमसीसी लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा निष्क’र्षमा पुग्ने सुमारलाई बताएको भेटवार्तामा
सहभागी एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधारले जानकारी दिए । ‘चार वर्षदेखि थाँती रहेको विषय छ यो । अहिले हामी संयुक्त सरकारमा हौँ । हामीसँग मात्र होइन, अरू पार्टीसँग पनि कुरा गर्नुहोस्’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता तुलाधरले भने, ‘यो नेपाली जनतासँग जोडिएको बिषय हो ।
नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने कुरा अहिले तपाईंहरू आएका बेला सुनिश्चित हुन पाओस् ।’ उनका अनुसार भेटवार्तामा आफूहरूले सुमारलाई एमसीसीबारे धेरै प्रश्नहरू गरेको र तीबारेमा उनले स्पष्ट पार्न कोसिस गरेकी थिइन् ।
उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी नेपाली जनताको हितमा रहेको र कुनै अर्को स्वार्थका लागि नभएको दाबी गरेकी थिइन् । ‘एमसीसी कार्या’न्वयन गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंहरूको हितमा छ, गर्नुहुन्न, त्यसले कुनै अहित गर्दैन ।
स्वयं अमेरिकी सरकारका जिम्मे’वार व्यक्तिले दिएका अभिव्यक्तिबाट एमसीसीबारे भ्रम फैलाइएको छ’, नेता नेपालले सुमारलाई भनेका थिए । नेता नेपालले अगाडि भने, ‘तपाईंहरु आफैंले यसमा कन्फ्युजन सिर्जना गर्नुभयो।
त्यसकारणले यो अनुदान हामी लिन चाहँदैनौँ। राष्ट्र हितवि’रुद्ध आउने कुनै पनि अनुदान सहयोग, पैसा हामी लिँदैनौँ ।उनीहरूबीच नेपाल निवास कोटेश्वर’मा भेटवार्ता भएको थियो । उपाध्यक्ष सुमारले नेता नेपाललाई भेट्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेकी थिइन् ।